सबैजना आत्मअनुशासनमा बसौं
शुक्रबार, ३१ बैशाख, २०७८
दोस्रो चरणमा झन बौरिएर फैलिरहेको महाकाल कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न देशमा फेरि निषेधाज्ञा लागू हुन थालेको छ । पहिले तेस्रो देशहरुमा भइरहेको कोरोना महामारीको रुप अहिले हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतमा नरसंहार मच्याएर रमाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा बलियो मानिएको भारतजस्तो शक्तिशाली देश अहिले कोरोनाबाट आफू र आफना जनतालाई जोगाउन विश्वसामु हारगुहार गर्दैछ । भारतमा संक्रमितहरुले उपचार नपाएर, औषधी र अक्सिजनको चरम अभाव झेल्दै जीवन बचाउन हारगुहार गरिरहेका छन् । शव जलाउन घाटहरुको चरम अभाव भएका समाचार छन् । जताततै रुवावासीबाहेक केही छैन । सधै अर्काको अलोचना गरेर रमाउने मोदी पक्षीय भारतीय सञ्चार माध्यहरु पनि अहिले कोरोनाबाट जोगिन भगवानको पुकारा गरिरहेका छन् । कारुणीक र दर्दनाक दृश्यहरु देखाउँदै भगवानसँग बिलौना गरिरहेका छन्, ‘देशका शासकले हामीलाई अब रक्षा गर्न सक्दैन, हे भगवान ! अब तिम्रो मात्र सहारा छ, कहाँ छौं तिमी ? चाँडो आउ हामीलाई बचाउ !’
भनिन्छ, छिमेकमा लागेको आगोबाट सर्तक भइएन भने चाँडै आफ्नो पनि पालो आउँछ । नभन्दै हामीले अझै सर्तकता अपनाउन सकेनौं भने हाम्रो देशमा पनि भारतको जस्तै कारोना महाविनाशको महासंकट आउने पक्कापक्की जस्तै छ । किनभने आफैंले नभोगी महशुस नगर्ने र आफैलाई नपरी केही गरि नचेत्ने हाम्रो बानीले यहि संकेत गर्नेगरेको छ । अहिले नेपालसँग सीमाना जोडिएका विहार, बंगाल र उत्तरप्रदेश राज्यमा पनि कोरोना महामारीको हाहाकार सुरु भइसकेको छ । र त्यो क्रमशः खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै कतै उपचार, कतै रोजगारी अनि कतै रोटीबेटीको सम्बन्धको बहानामा दोस्रो पटक पनि कोरोना नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ ।
हामीलाई ज्ञात छ, यो महामारीको बेला हाम्रो हाल खराब छ । फोहोरी राजनीति र अहंकार अनि अन्धविश्वास सस्तो छ हाम्रोमा । तर, दुरदर्शीता र जिम्मेवारीबोधको अभाव छ । यसैले पनि होला अरुबेला हाइहाई गर्ने देशका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना महामारी फैलिएपछि अब उपचार गर्न सकिदैन भनेर नागरिकहरुसँग ‘बाईबाई’ गरिसकेका छन् । उनले कोरोना संक्रमण रोकथामको एक वर्षदेखि सिकेको अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न नै चाहेनन् । न त उनले सुबिधासम्पन्न अस्पताल बनाउन ध्यान दिए, न त चिकित्सकहरुलाई दक्ष बनाउन चासो । महामारी आएमा पूर्ण रुपले जुध्नका लागि कुनै पूर्वतयारी गर्न चाहेनन् । बरु दोस्रो चरणको संक्रमण बढ्न थालेपछि नक्कली अध्योध्या बनाउन चन्दन घसाएर हजारौंंको मेला लगाएर तुजुक देखाए । मान्छेको रक्षा गर्ने चिकित्सक, औषधी र अस्पतालले हैन, निर्जिव भगवानले हो भने झैं मन्दिरमा करोडौको गजुर चढाएर भ्रमपूर्ण सन्देश दिए । हतारहतारमा भीड जम्मा गरेर देखावटी जस लिन धरहरा उद्घाटन गरेर तुजुक देखाए । कोरोनाकालमा जनता महामारी भोगिरहेको बेला बहुमतप्राप्त ओली सरकारले तुजुक देखाउनुबाहेक अरु केही गर्न सकेन । वर्षौदेखि सञ्चालमा रहेका गौरवका आयोजनाहरु आफूले बनाएको भनेर प्रचार र आत्मरतिमा रमाइरह्यो । सरकारलाई समिक्षात्मक सुझाव दिनेहरुलाई शत्रु झैं व्यवहार गरेर लोपार्दै सन्तुष्टि लिइरहन मस्त रह्यो ।
भो ! असक्षम, अदुरर्शी र गैरजिम्मेबार सरकारको धेरै आलोचना गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा अब यो महामारीबाट जोगिने उपाय हामी आफैले नै खोज्नुपर्छ । त्यो एकमात्र उपाय भनेको आत्मअनुशासनको पालना गर्नु हो । हामी आफैंले सकेसम्म संयमित बनेर अनुशासन पालना ग¥यौं भने हामी पक्कै पनि कोरोनासँग जुध्न सफल हुनेछौं । हैन, अटेर गरेर फेरि पनि हामीले ‘लातोंका भुत बातो से नमाने’ झैं ग¥यौं भने हामीले भारतमा भन्दा धेरै ठूलो महाविनाश भोग्नेछौं । छिमेकी देशमा सुनामी बनेर आइसकेको कोरोनाको नरसंहारी संक्रमणलाई छेक्ने उपाय पनि हाम्रो आत्मअनुशासन नै हो । यसैले यो बेला हामी सबैले कोरोना संक्रमण रोकथामलाई अर्जुनदृष्टि बनाउन आवश्यक छ । हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था, कति छन् अस्पताल, कति छन् शैय्या, भेन्टिलेटर अनि आइसियुहरु र कति उत्पादन हुन्छन् अक्सिजन भनेर ?
हो ! आपतविपद्मा नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको नै हो । तर, सरकार नै अब केही गर्न सकिदैन भन्दै मनोबल कमजोर बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिएपछि हामी आफैंले सतर्क हुनुको विकल्प हुदैन । हामीले देख्यौं, मसला र जडिबुटी खाएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम हुदैन रहेछ । यसको उदाहरण चीनबाट हामीले थाहा पाइसकेका छौं । चीनले आफ्नो आत्मअनुसासनबाटै कारोना नियन्त्रण गरेर विश्वमा उदाहरण बन्न सफल भयो । तर, कोरोना केही होइन भन्दै अनुशासन पालना गर्न हेलचेक्र्याई गर्ने अमेरिका, इटाली, बेलायत र भारतजस्ता देशहरु सबैभन्दा ठूलो कहर भोग्न बाध्य भए । उनीहरु अनुशासन पालना गर्नुभन्दा हतारमा खोप बनाएर विश्वबजारमा नामी र दामी बन्ने दौडमा लागेका थिए । तर, खोपले मात्र पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न संभव हुदोरहेनछ भन्ने पनि पुष्टि भयो । यसैले हामीले पनि विश्वबाट पाठ सिकौं र कोरोना रोकथाममा अनुशासनको पालना गरौं । हुन त भोको पेटको अगाडि नैतिकताको बखान गर्नु ‘पाप पुराण’ लगाएर सरह हो । तर कल्पना भन्दा पनि अत्यासलाग्दो वास्तविकता हुने भएकोले अनुशासनबाहेक हाम्रो अर्को विकल्प छैन ।
बिचार गरौं, विरालोले बाटो काट्दा हच्किएर सतर्क हुने हामी नेपालीहरु कोरोनाको सुनामी आइसक्दा पनि अझै किन सतर्क भइरहेका छैनौं ? ख्याल गरौं, ज्वालामुखीको काम बिस्फोट हुनु हो । हामीले रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अनुशासन पालना गरेनौं भने कोरोना सुनामी हामीमाझ नरसंहार बनेर विस्फोट भएरै छाड्नेछ । अनि त्योबेला हामी पनि भारतीयहरु झैं सबै हालतलाई भगवान भरोसा छोड्न बाध्य हुनेछौं । रुँदै कराउँदै विलौना गाउँदै– ‘आउ भगवान हामीलाई चाँडै आफूसँगै स्वर्ग लगेर मानव योनीबाट मुक्ति दिलाउ, हामीले पाउने हण्डर पाउसक्यौं गुमाउने सबै गुमाइसक्यौं, अब जिउँदो राखेर अझै यातना नदेउ ।’
सोमबार, २० बैशाख, २०७८
तीब्र गतिमा फैलिँदै कोरोना : प्रदेश १ मा सक्रिय संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्यो
विराटनगर । प्रदेश १ मा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार नाघेको छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कोरोनाका सक्रिय संक्रिमितको संख्या १० हजार ३०१ जना पुगेको हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको सुरुवातसँगै
विराटनगरमा संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च, २९६ संक्रमित थपिए
विराटनगर । प्रदेश १ मा आज १ हजार ३९ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । दैनिक संक्रमण संख्यामा यो अहिले सम्मकै उच्च हो । मोरङमा ४०५, झापामा २५७, सुनसरीमा १४२, ताप्लेजुङमा ७९, संखुवासभामा ५४, सोलुखुम्वुमा २०, धनकुटामा १७, भोजपुर र
स्वास्थ्य सामाग्रीमा कालोबजारी : ७ वटा फार्मेसी कारबाहीमा
विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, सुनसरीको धरान, इटहरीलगायतको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अधिक मात्रामा कालोबजारी हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य समाग्रीमा कालोबजारी हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, विराटनगरले मोरङ र सुनसरीको ९ वटा
पाँचथरमा पनि संक्रमितको मृत्यु
पाँचथर । पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नं.२ एकतीन घर भएका ६० वर्षे पुरुषको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज मृत्यु भएको छ । त्यहाँस्थित कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको हो । २६ गते कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएको पुष्टि
रित्तिदै कोरोना कोष, १७ करोड खर्च
विराटनगर । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश नं. १ सरकारले निर्माण गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट १७ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । २०७७ चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश नं. १ मा कोरोना जनसुरक्षा कोष स्थापना गर्ने
समाचार टिप्पणी : सरकारको ‘लाचार निर्णय’
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त छ । अहिले हरेक मानिस सरकार खोजिरहेका छन् । सारो गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकार सम्झनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । तर, केन्द्र सरकार सत्ता टिकाउने जोडघटाउको राजनीतिमा व्यस्त छ । स्थानीय सरकार साधन
रतुवामाईमा ३० जनासम्म कोरोना संक्रमितको उपचार हुने
महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना
छोराको उपचारमा सुकुमबासी बने मियाँ
सेनिटाइजरको कालोबजारी गर्ने विज्ञान फार्मेसीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना
‘बालशिक्षाका उपलब्धि बिग्रने जोखिम बढ्यो’
आमा ! तिम्रो र मेरो कनेक्सन
विराटनगरमा नक्कली ‘रेमडिसिभर’को बिगबिगी : गिरोह पक्राउ